Isikhokelo sokuGqibela kwiLotus Leaf Extract for Weight weight
The Ukukhutshwa kwegqabi le-lotus luhlobo lwesityalo samanzi asemanzini esaziwa ngokuba ngamagqabi awo aluhlaza kunye neentyatyambo ezimhlophe. Esi sityalo sihlala sifumaneka kwimimandla eshushu yase Middle East nase Asia.
Yaziwa ngamagama aliqela afana neLotus yelizwe laseIndiya, ilotus ingcwele, imbotyi yase-Egypt, kunye ne-arrowroot yaseTshayina, esi sityalo sinembali ebanzi esusela kumawakawaka eminyaka, ngakumbi kwicandelo lezonyango.
Isityalo sonke sinendima ebalulekileyo kumayeza amaTshayina njengoko sijongwa njengonyango olusebenzayo kuyo yonke into, nokuba kungabopha izilonda, urhudo, njalo njalo. Amagqabi esityalo se-lotus nawo athatyathwa njengeluncedo ekuncedeni umntu ukunciphisa umzimba.
Owona msebenzi mkhulu wamagqabi kukunciphisa ukopha okuza ngenxa yesikizi kunye nokuya esikhathini. Isenokukunceda ukukhusela ukugabha kwegazi. Ngapha koko, onke amalungu esityalo anokusetyenziswa njenge-cardiotonic kunye ne-astringent. Ngaphaya koko, isicatshulwa segqabi le-lotus sinokusetyenziswa njengonyango olusebenzayo lwetyhefu ye-mushroom.
1. Imbali emfutshane kaLotus Leaf
The Ukukhutshwa kwegqabi le-lotus luphawu olubalulekileyo kwinkolo yamaBuddhist. KwanamaJiphutha ayithatha njengophawu olubalulekileyo loxolo, ukuzola, ucoceko nobuhle, ngenxa yendlela iintyatyambo ezidadayo xa zisemanzini. Nangona ilusus yaziwa ngokuba yindinisa, inecala elinamandla kuyo, ngakumbi kunyango lweemeko ezahlukeneyo emzimbeni wakho, nasekuncedeni uhlale ulungile kwaye usempilweni.
Ukususela kumaxesha amandulo, iqabunga leLotus sele lithathwa njengelona nto ibalulekileyo kunyango olulolunye. Abaphengululi, iimonki kunye neeroys kudala basincoma esi sityalo simangalisayo. Yaziwa ngeentyatyambo zayo ezinamagqabi kunye namagqabi aluhlaza aqaqambileyo, isityalo seLotus sinokufumaneka ikakhulu kwimimandla eshushu yaseAsia.
Isityalo singakhula sibe ngama-30 cm ubude. Amagqabi ayo ahlala eqokelelwa phakathi ekwindla nasehlotyeni kwaye omile phantsi kwelanga ngaphambi kokuba aqunywe kwiincinci ezincinci ukuze agcinwe.
The igqabi le-lotus incasa ekrakra kancinci, ukanti inezibonelelo ezininzi zempilo ezinamandla. Izibonelelo zako eziphambili kukukhupha isibindi sakho kunye nokugcina umqolo wakho usempilweni. Izifundo zanamhlanje zibonisa ukuba amagqabi weLotus anokunceda ukunciphisa uxinzelelo lwegazi oluphezulu kunye nokukhusela imisipha yemisipha.
2. Ukusetyenziswa kweLotus Leaf Sebenzisa
Kukho iindlela ezininzi zokusetyenziswa kwegqabi leLotus. Izifundo zePhemacologic zibonisa ukuba ine-hyperlipidemic, anti-inf infoments, immunomodulatory, hepatoprotective, and antioxidant. Nangona kunjalo, iingcali zikholelwa ukuba izilingo zeklinikhi kumaqabunga e-Lotus zisasilela.
3. Izibonelelo zeLotus Leaf Extract
Apha ngezantsi kunikwe ezinye ingxelo izibonelelo zegqabi elinobukhulu obuninzi.
Ingcambu yesityalo se-lotus ikwafunyenwe ukuba inomlinganiselo ofanelekileyo wefayibha kunye ne-carbs entsonkothileyo. Xa ezi zinto zimbini zisebenza kunye, zinokukunceda ukulawula i-cholesterol yakho kunye nenqanaba leswekile yegazi. Ngapha koko, omabini la macandelo anokukunceda ugcine inkqubo eqinileyo yokugaya.
Kumayeza amaTshayina esiqhelo, eyona nto iqhelekileyo ukusetyenziswa kwegqabi lelotus kunyango sohudo. Ngesi senzo sendalo, kuya kufuneka ukhuphe imbewu ye-lotus emanzini afudumeleyo kwiiyure ezimbalwa kwaye ungeze iswekile uze uzuze incasa yakho oyithandayo.
Amagqabi e-lotus anokuba sisisombululo esisebenzayo samabala asebusweni. Sebum, isixhobo se-waxy esinoxanduva lokuqhekeka emva kokuvala iipores zolusu lwakho, sinokwehliswa ngoncedo lotus. Yongeza nje iti iti eluhlaza kwaye uyisebenzise ebusweni bakho.
Ukuvuvukala kuhlala kuza kunye nokuziva kobushushu, umphumo ongathandekiyo osuka kwiimeko ezahlukeneyo. Oku kusenokubangelwa kukuvezwa ziikhemikhali, ukwenzakala, kunye nokwenzakala komzimba.
Izifundo zamva nje zibonisa ukuba iimbewu zombini ezimhlophe kunye nezibomvu ziyanceda ekunciphiseni ukuvuvukala. Uphononongo lwakutshanje lufumanise ukuba i-polysaccharides ekhoyo kwiplamu yesifo se-lotus ineziphumo ezichasene nokuvuvukala.
Olunye uphononongo lubonisa ukuba ukongeza ubusi kumgubo owenziwe ngembewu yelotus kunokuba nokusebenza ngokuthoba ukukhwehlela kwakho.
Inceda ngeXesha lakho
Amagqabi kunye neengcambu zethambo kudala zisetyenziswa kunyango lwaseTshayina ukulawula umjikelo wokuya esikhathini kwabasetyhini kunye nokukhusela ukopha okugqithisileyo.
Alukho uphando olwaneleyo lwesayensi olwenziwe kula mabango. Nangona kunjalo, olunye uphando lubonisa ukuba isuphu yokusela okanye ijusi eyenziwe ngethontsi inokunceda ukukhusela i-anemia ngenxa yokulahleka kwegazi ngexesha lokuya esikhathini.
Uphando olwenziwe ngo-2014 lubonise ukuba i-neferine, i-organic compact enokufumaneka kwi-umbungu yembewu ye-lotus, inokuthi ngokuphelileyo iyeke okanye ithintele ukwanda kweeseli zomhlaza kwimiphunga. Uphando lubonisa ukuba intsholongwane inokusinyanga esi sifo sibulalayo.
4. I-Lotus Leaf Extract Dosage
Efanelekileyo iglasi yelotus ikhupha idosi iya kuxhomekeka ikakhulu kwimiba eyahlukeneyo, enjengempilo yomsebenzisi, iminyaka, imeko, njl. Njengangoku, akukho lwazi lwaneleyo malunga nokuba yeyiphi na ithamo elifanelekileyo lokukhupha amagqabi e-lotus.
Kubalulekile ukuba ukhumbule ukuba iimveliso zonyango lwe-herbal azisoloko zikhuselekile kwaye ukwazi ukuba umthamo ofanele ukuwuthatha kubaluleke kakhulu. Ngaphandle kwedosi efanelekileyo, kufuneka kulandelwe izikhombisi ezifanelekileyo. Ezi zihlala ziprintwa kwilebula yemveliso. Ikwangumbono olungileyo ukubonana nochwepheshe wezempilo okanye ugqirha ngaphambi kokusebenzisa naluphi na uhlobo lwezinto zokugcina amagqabi elusus.
5. ILotus Leaf Extra Weight weight
Abantu abaninzi banokufunga ngegqabi le-lotus xa kuziwa ekudleni okuvela emzimbeni okanye emzimbeni. Inezinto ezinamandla ezinokukunceda ukumisela iswekile yegazi kunye nenqanaba lekholera embi.
Ngapha koko, kuye kwakho izifundo ezibonisa ukuba igqabi leLotus belisetyenziswa ngexesha lakudala kunyango lwamayeza esiTshayina ngenxa yokunciphisa umzimba. Eyona nto ilungileyo malunga nokusebenzisa Amagqabantshintshi egqabi lokwenza izinto emzimbeni kukuba inokunceda ukukhusela amafutha kunye ne-carbohydrate ekubeni ingangenwa, nto leyo ephucula umgangatho we-metabolism.
Ngenxa yezinto ezinamagqabi e-lotus zisebenza, ithathwe njengesixhobo esibalulekileyo kwi-Teatox yokudibanisa, imveliso yezinto eziphilayo ezinokukunceda ukunciphisa umzimba ngokusebenzisa i-detox. Njengokwenyani, amagqabantshintshi egqabi lotus asetyenziswa njengesixhobo seekhrim ezichasene ne-cellulite.
6. I-Lotus Leaf Extra for Skin
Ngokuphathelele intyatyambo yeLotus, idla ngokubonwa njengophawu lokuzola, ucoceko, okanye ukhanyiselo, ngakumbi kwinkolo yamaBuddhist. Kodwa le ntyatyambo ye-botanical ayithathwa kuphela njengophawu olubalulekileyo lwenkolo, kodwa iluncedo kakhulu nakwihlabathi le-skincare.
Intyatyambo yeLotus, enegama lesayensi leNelumbo nucifera, ifunyenwe inika izibonelelo ezinamandla kulusu.
Apha ngezantsi kukho ezinye izibonelelo zendalo yeentyatyambo yeLotus ngokwe-skincare.
Okokuqala, lo igqabi le-lotus kwaye izicatshulwa zeentyatyambo zinomthamo ofanelekileyo we-antioxidants enamandla, njengepolyphenol kunye ne-flavonoids, kunye neevithamini ezithile. Ezi khompawundi ezinamandla ziyaziwa ngezibonelelo zabo zokulwa ukuguga. Ii-antioxidants zingakhusela ulusu kwii-free radicals ezinokuthi zonakalise ulusu kwaye zikhokelele ekwaluphaleni.
Ngokophando lwejenali yaseKorea yoBunjineli bobuchwephesha, izicatshulwa zegqabi lentyatyambo kunye neentyatyambo zinganceda ukuphucula kakhulu ulusu. Oku kuya kukhokelela kwiiseli ezomeleleyo zesikhumba, ulusu oluqinileyo, kunye nemibimbi encinci. Ngapha koko, uphando lukwabonisa ukuba ukuvela kwe-lotus kunokuba neziphumo ezikhanyayo kulusu.
7. I-Lotus Leaf Extract kunye ne-L-carnitine
Kwakukho izifundo ezenziwa kwiigundane ngokubhekisele ekulahlekelweni ngamafutha. Nangona kunjalo, i-metabolism yeerats yahluke kakhulu ebantwini. Kwelinye, ezi zilwanyana zifumana amanqatha azo ekutyeni izilwanyana. Ke, imetabolism yayo yakhiwe ukuba isebenze ngokuxhomekeka kwizitishi njengowona mthombo wamandla wazo.
Yintoni efunyaniswe yisayensi kukuba iigundane zitya ukutya okunamafutha amaninzi, nto leyo efana nabantu. Nangona kunjalo, oku akusemodeli ephumelelayo kwizifundo zabantu kuba i-metabolism yenzelwe ukuxhomekeka ikakhulu kwizilwanyana. Ukuthatha isixa esilinganiselweyo sesitatshi kulungile, kodwa eyona ngxaki ilapha kukuba abantu banotyekelo lokutya isixa esikhulu sokutya okunesitatshi.
Kodwa esi sifundo sahlukile. Olu phando lutsha luya kuba linyathelo elisondeleyo ekufumaneni ukuba izongezelelo ezithile ezinamagqabi enziwe ngegqabi lelus kunye ne-L-Carnitine ineziphumo ezithile ekulahlekelweni ngamafutha kwaye ukuba inokuthintela ukufunyanwa kwamafutha. Nangona kunjalo, ikwindlela ye-in-vitro, eyenziwa ngokwahlukeneyo kunye nokusetyenziswa kweeseli zamanqatha ezibekwe kwisitya sezilwanyana kwaye kungabi kwi-vivo okanye umntu wobomi bokwenyani. Iziphumo zikholisa ukuba ziyalahlekisa ngamanye amaxesha kuba iye yahlukanisa iziphumo endaweni yokujonga imeko yokwenyani. Nangona kunjalo, unyango olunjalo luyathembisa.
Iinzululwazi zifumanise ukuba igqabi le-lotus inezakhono ezibini ezahlukeneyo ezinokuba zezifanelekileyo ekunyangeni ukukhuluphala. Ngapha koko, kuphucula i-lipolysis, ebangela iiseli ezinamafutha ukuba zikhulule amafutha. Oku kuluncedo ngakumbi kubantu abasebenzayo nakwabo baziqhelanisa rhoqo nokulandela ukutya okune- calorie esezantsi. Ngokukhupha amanqatha kwindawo yokugcina, umzimba wakho uya kuba nakho ukusebenzisa amanqatha amandla endaweni yokuwagcina.
Enye impembelelo yegqabi leLotus xa kusiziwa ekulahlekelweni ngamafutha kukuba iyanceda ukukhusela i-adipogeneis. Oku akuchanekanga ngokupheleleyo kuba into eyenzayo kukuthintela ukuqokelelwa kwe-triglyceride ngexesha le-adipogenesis.
Ngokusisiseko, xa umzimba wakho ufumana umqondiso wokuba sele kukho inani lamandla emzimbeni wakho, uya kuvelisa iiseli ezikhulu zamafutha. Ngeli xesha lenkqubo, i-triglycerides, igama lonyango lwezinongo, liya kuthi liveliswe sisiphumo seswekile kunye namanye amaqatha. Amagqabi eLotus anganceda ekuthinteleni oku.
8. Isithsaba seLeotus Leaf iyathengiswa
Ngenxa yezibonelelo ezininzi zeelotus ezinqabileyo zamagqabi, akumangalisi ukufumana Kukhutshwa igqabi leLotus kwi-intanethi. Ezi mveliso zihlala zithengiswa ngohlobo lwezongezelelo kwaye zinokuthathwa kwiidosi ezahlukeneyo. Uninzi lwezi zongezo zithengiswa njengezongezo zokulahleka kwesisindo. Ezi zongezo ziveliswa ziinkampani ezahlukeneyo zamayeza kwaye zisasazwa kwihlabathi liphela. Kuyenzeka ukuba uthenge ezi zongezo ngaphezulu kwikhawuntara.
9. Ungayithenga phi i-Lotus Leaf Extract Powder in Bulk?
Xa u Thenga igqabi leLotus powder ngobuninzi, uya kuba nakho ukonga imali kuba kuqoqosho ngakumbi kunokuthenga izongezelelo ngokukodwa. Olu luluvo olulungileyo ukuba ucwangcisa ukusebenzisa izongezelelo zexesha elide. Ngaphandle koko, kuya kuthatha iiveki okanye iinyanga ngaphambi kokuba uqalise ukubona iziphumo.
Kodwa xa wena Thenga igqabi leLotus susa umgubo ngobuninzi, qiniseka ukuba uthenga iimveliso zokwenyani kwaye hayi ezinye izinto zokuthenga ezingezizo ezinokubangela ukwenzakala ngaphezu kokulungileyo.
Ke, ngaphambi kokuba uthenge, kuluvo olulungileyo ukwenza uphando ngalo Umthengisi wegqabi leLotus ojongana naye.